गुमनाम गुम्रा | ...Yadharu
Home > यादहरु	> गुमनाम गुम्रा
December 19, 2010 Dilli Malla	Leaveacomment Go to comments
२०१७ साउन ६ गते दाङको बेलुवा बञ्जाडी हत्याकाण्डमा मारिएका थारु किसान गुम्रा थारु । घोराहीमा निर्मित उनको प्रतिमा (बीचमा) । सोही हत्याकाण्डमा घाइते कालुप्रसाद । (सिस्नेखोलाको तिरमा)
कहिले जन्मिए होलान् गुम्रा ? तिथिमिति कसैलाई थाहा छैन । गुम्राका भतिजा ठाकुर भन्छन्- ‘म पन्ध्र वर्षको थिए त्यतिबेला उनी हाम्रै उमेरका जस्तो लाग्थ्यो, जतिबेला माइला काकालाई जमिन्दारहरुले मारे’- पचास वर्ष नाघिसकेका गुम्राका भतिजा ठाकुरप्रसादको कुराले त्यस्तै वि.सं.१९६५-१९७५ को बीचमा लालु चौधरीका माइला छोराको रुपमा जन्मिएका थिए गुम्रा थारु । विवाहपछि एकमात्र छोरी जन्मिएकी थिइन् उनकी- चेर्‍र्या चौधरी । अहिले उनी जीवित छिन् वा छैनन् थाहा छैन । सानैमा उनको ब्रुहान (बर्दिया)तिर विवाह भएको थियो । ‘माइला काका (गुम्रा) कति रमाइला मान्छे थिए’- बाल्यकालको यादले मन रोमाञ्चित हुन्छ ठाकुरप्रसादको । ‘केटाकेटीमा हामीलाई उनले कत्ति माया गर्थे कत्ति ? सायद मायाको मापन गर्ने कुनै त्यस्तो साधन हुन्थ्यो भने उनले नापेर नै देखाइदिन्थे गुम्राको माया । कुरा गर्दागर्दै उनी मलीन देखिए- बादलले छोपेको जुनेली रातजस्तो ।
आखिर किन मारियो गुम्रालाई ? उनले जमिन्दारको के बिगारेका थिए ? प्रहरी प्रशासनले किसानहरुलाई किन दमन गर्‍यो सत्र सालमा ? के किसानहरु नै दोषी थिए उक्त घटनामा ? के थियो घटनाको निहुँ ?
त्यसबेला थारु किसानहरुले जोत्दै आएको जमीनका मालिक बासुदेव घिमिरे, भागु, मेदिनीलगायतका जमिन्दारहरुले २०१६ साल माघमा तोरी भित्र्याउने बेला परम्परादेखि चल्दै आएको चौकुर प्रथा (उत्पादनको ३ भाग किसान र १ भाग जमिन्दारलाई बुझाउने नियम) लाई बदलेर अधियाँ (आधा-आधा) हुनुपर्ने प्रस्ताव राखे तर त्यो प्रस्ताव किसानहरुलाई मान्य भएन । त्यही निहुँबाट विवाद शुरु भयो । घटनाका प्रत्यक्षदर्शी/पीडित कालु, कुनुवा र ठाकुरका अनुसार विवाद बढ्न थालेपछि जमिन्दारले कहिले हलो जुवा काटिदिने, कहिले गोरु चुट्ने, कहिले जोत्न नदिनेजस्ता क्रियाकलाप गर्दै किसानहरुलाई दिनहुँ दुःख दिन थाले । जमिन्दारहरु चाहन्थे- पुस्तौदेखि चलि आएको चौकुर प्रथा बदलेर अधियाँ लागू गर्न र किसानहरुको श्रममा रजाई गर्न । तर, सोझा इमान्दार र स्वाभीमानी थारु किसानहरुलाई जमिन्दारको अत्याचार सह्य भएन र विरोध गरे । परिणामतः गुम्रा मारिए, कालु र रत्नप्रसाद घाइते बनाइए र तीन चार महिनासम्म उपचारको अभावमा अस्पतालकै शैयामा छट्पटाउनु पर्‍यो । थुप्रै किसानहरुले तत्कालिन ‘प्रजातान्त्रिक’ काँग्रेसी सरकार र प्रहरी प्रशासनको हिरासत र जेलका चिसा छिडीमा महिनौँसम्म यातना भोग्नुपर्‍यो । अन्ततः जमिन्दारकै पक्षमा फैसला भयो र सोझा किसानहरुले काम नगर्ने जमिन्दारलाई अधियाँ बुझाउनुपर्ने भयो ।
बेलुवा बञ्जाडीको खेत, जहाँ गुम्रा मारिएका थिए । पछि उनको शव यही खेतमा गाडियो ।
Ram Bahadur Gharti
dilli sir sachai vanda yo yauta padda kheri katha jasto lage pani yo adhikamsa nepaliko pir betha ani pida ho.
समय र देश घर छोडेको अन्तिम रात